Global Voices teny Malagasy · 15 Marsa 2012
Tantara tamin'ny 15 Marsa 2012
Pakistana : Fandripahana ny Shiita – Hatrany Karashi ka hatrany Kohistana
Azia Atsimo15 Marsa 2012
Fiovana ara-politika tany Pakistana tao aorian'i Osama Ben Laden no nametraka onja vaovao ny fampihorohoroana indrindra teo amin’ireo Shiita vitsy anisa. Tamin'ny taon-dasa dia Shiita maro no voafandrika tao Karashi hatrany Kohistana ary novonoina, Maro amin’ireo mpandinika moa no milaza fa fandripahana vondron'olona izy io.
Azia Atsinanana15 Marsa 2012
Miaraka amin'ireo an'arivony maty, nampijaliana, nosamborina sy nanjavona, mitohy ny tolon'ny vahoaka Siriana ao anatinà herisetra tsy mbola nisy toy izany. Ao anatin'ny ezaka ataony hampanginana ireo mafana fo, nohamafisi'ny fitondrana ny fepetra faneritereny ireo mpanao gazety, bilaogera ary ireo maàna fo amin'ny famokarana lahatsary. Salma Yafi, mpianatra ho mpanao...